Anyị na ụfọdụ ọrụ ịtụnanya na-arụ ọrụ mmekọrịta ọhaneze ụlọ ọrụ anyị na ndị ahịa anyị. Mmekọrịta ọhaneze ka bụ nnukwu ego - ndị anyị na Dittoe PR enwetala anyị ekwuru na New York Times, Mashable na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ na-ewu ewu.
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara PR ghọtara otu esi edepụta nkwupụta mgbasa ozi na-akpali akpali ma kesaa ha na ndị na-ege ntị ziri ezi, oge ụfọdụ ha anaghị ebuli mgbasa akụkọ pịa yana ha nwere ike ịbụ maka ọchụchọ.
Gbaa mbọ hụ na enwere ike tụọ mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Anyị na-agbakwunye mkpọsa mkpọsa na peeji ọdịda pụrụ iche na Mgbasa Ozi Anyị ka anyị wee nwee ike ịhụ ebe okporo ụzọ si abịa na uru ọ bara.
Tinye n'ọrụ isiokwu dị mkpa na aha nke Ntọhapụ Mgbasa Ozi Gị - nke a na-ejikarị na peeji nke aha saịtị saịtị ndị a na-ejikọ ya.
Target 1 ruo 3 nkebi ahịrịokwu isiokwu dị mkpa n'ime ahụ nke pịa ntọhapụ na hụ na ị ugboro ugboro ha. Iji ha n’obere isiokwu ma ọ bụ ịhazi ha n’atụghị egwu ma ọ bụ n’ahịrị n’edemede na-enye aka mgbe nile, kwa!
Gụnye njikọ azụ gị na saịtị ma ọ bụ ọdịda peeji n'ime mbipụta akụkọ ma hụ na ijikọ isiokwu ma ọ bụ akpaokwu, ọ bụghị aha ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbakwunye njikọ, hụ na achọtara njikọ dị n'akụkụ akpaokwu.
Jiri ihe onyonyo n'ime gburugburu nke pịa ntọhapụ gị. Aha faịlụ site na iji isiokwu (dashes maka oghere) na, ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ya na ederede ọzọ ma ọ bụ aha - jiri isiokwu.
Na-emefu ego ahụ. M a tọhapụrụ pịa releases n'ihu na-enweghị akwụ ụgwọ maka nkesa na ha emeghị ka otu njuanya… na-akwụ ụgwọ maka nkesa site Ahịa ahịa, PRWeb, Pịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ime ka o nwekwuo ike ịnakọta akụkọ gị na saịtị akụkọ nwere ikike dị ukwuu.
Imchọta nkwupụta mgbasa ozi nwere ike ịnye ụfọdụ mgbakwunye na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ gị mgbe ekesara ma wepụta akụkọ a site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụ saịtị akụkọ. Echefula ohere iji mee ka backlinks bara uru laghachi na saịtị gị, na-ebuli ọkwa gị ma na-amụba ikike nke saịtị gị site na engines ọchụchọ.
Tags: dittoeprahịaprpr nkesambipụta ndị nchụ nta akụkọpịa mgbasa nkesapịa ntọhapụ ederedeịpịprweb
Kedu ihe pụrụ iche gbasara Social Media?
Yabụ ihe ị na-ekwu bụ na anyị kwesịrị iji ụdị mmiri SEO kụrụ mmiri na akwụkwọ akụkọ mgbasa ozi?
Kpamkpam, Bob. Somefọdụ nkesa mgbasa PR anaghị enye ohere iji HTML, n'agbanyeghị. N'ihi ya, iji Keywords dị nso na nkesa dị mma nwere ike inyere aka.
Ekele maka aha PRWeb na post gị Doug 🙂
Na PRWeb.com anyi nwere otutu ihe omuma maka imeputa akwukwo akuko gi maka engines ọchụchọ, lee 5 uzo ngwa ngwa iji malite. Ziri ezi na okwu gị n'okpuru, na iji tinye Keywords na nkesa dị mma na-enyere SEO aka.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na SEO maka mbipụta akụkọ, ị nwere ike tweet anyị @prweb always
Onye njikwa obodo, PRWeb
Daalụ maka ịkpọtụrụ PressKing!
Izipu mgbasa akụkọ nwere ike inwe ọmarịcha mmetụta na SEO, n'ezie. Kedu ihe kpatara na anyị na - enyekwa SEO ihe eji achọpụta ihe (yana nkwupụta akụkọ anyị na usoro nlekota mgbasa ozi) - ọ dị mma mgbe niile ịlele ọrụ ịntanetị gị, ọ bụghị ya?
Anyị nwere atụmatụ ole na ole ọzọ anyị ga - ewebata n’izu ndị na - abịanụ - a ga m edebe gị!
Mgbasa mgbasa ozi mgbasa ozi bụ akụkụ dị mkpa nke njikọ njikọ SEO. Ọ dị mkpa itinye akwụkwọ arịlịka na njikọta na ozu nke mwepụta. Agbanyeghị, ịkwesịrị iburu n'uche na nkwupụta mgbasa ozi kwesịrị ịbụ akụkọ. Ejila oge na ego na nkwupụta mgbasa ozi nke a ga-eleghara anya.
Enweghi ike ikwenye karịa, Nick. Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eleda ha anya
ozi ọma, tho. Mgbe enwere obi abụọ, wepụ ya!
Ọkt 11, 2011 na 10:42 AM
Edebela m akwụkwọ akụkọ maka ụlọ ọrụ anyị ma chọọ ịma etu m ga-esi gbochie inwe mmerụ ahụ maka inwe ọdịnaya abụọ? Na arịrịọ nke atọ m maka ọkwa m ghọtara na ọ bụrụ na saịtị ndị a etinye akụkọ m elu, igwe na-enyocha ihe nwere ike ịhụ ya dị ka ọdịnaya abụọ ma lie ngwaahịa ọhụrụ anyị. Kedu usoro kachasị mma ịgbaso?
Ọkt 12, 2011 na 7:18 PM
Ọ bụrụ n ’ilebanye anya na‘ ọdịnaya abụọ, ’ọ bụ ntakịrị akụkọ ifo na a ga-ata gị ahụhụ maka ya. Enweghị n'ezie ihe dịka ntaramahụhụ ọdịnaya abụọ. Rụtụ aka na ukara Google blog:
Nchịkọta ọdịnaya anaghị enwe mmetụta na-adịghị mma, mana ọ nwere ike ịmetụta mmetụta dị mma. N'ihi gịnị? Maka na ndị mmadụ nwere ike jikọta ya na ọdịnaya ebe ọ bụla etinyere ya. Wantchọrọ ka ebipụta ọdịnaya na URL naanị ka ndị mmadụ jikọta na otu URL ahụ. Mgbe ha jikọtara na otu URL ahụ, ị ​​ga-aka nke ọma. Mgbe ha jikọtara na ibe ndị ọzọ, ibe gị agaghị aga nke ọma dịka o nwere ike.
Kesa mgbasa akụkọ abụghị ezigbo mbọ iji duhie engines ọchụchọ… ọ bụ usoro a nwalere na eziokwu maka ikesa ozi, ma n'ọdịnala ma na weebụ.